Omoleye Sowore Mwana Mudiki Nhoroondo uye Untold Biography Chokwadi
musha Africa Omoleye Sowore Zvekuchecheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara Yemurwiri wekodzero dzevanhu zita rezita “Sho Baba". Yedu Omoleye Sowore Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hongu, munhu wese anoziva nezvekuronga kwaakaita kuratidzira kwakanzi "RevolutionNow" iyo yakamusunga neNigerian department of Security Services (DSS).
Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Omoleye Sowore's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Omoleye Sowore Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Omoyele Sowore akazvarwa pazuva re16th raKukadzi 1971 kuna amai vake, Madam Esther Kehinde Sowore uye baba, VaSowore mudunhu reNiger Delta muNigeria.
Ndiye mumwe wevana gumi nevanomwe vakazvarwa nababa vake, VaSowore avo vaive nemamwe madzimai akati wandei vanosanganisira Mai Esther Kehinde Sowore.
Nyika yeNigerian yenyika yeWest Africa dzinza reEse-Odo rakaberekerwa mumhuri yemhuri uye rinobva kuOndo State Nigeria.
Akakurira kunzvimbo yake yekuzvarwa muNiger Delta kwaakakurira pamwe nevanin'ina vake gumi nevatanhatu vanoziva zvishoma nezvake.
Semwana mudiki, Sowore ainetsekana nemaitiro akange akumbirwa nevabati vehove vemunharaunda yake kubata hove sezvo sosi yehupenyu hwevanhu vazhinji hwaibva pakurima hove.
Aive anofara mwana uye aisazombopotsa mukana wekutamba pamwe nevanin'ina vake uye nevamwe vana munharaunda yake.
Omoleye Sowore Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Sowore kufarira kwake kubata hove kwaive kuzadzikiswa paakatanga kudzidza kukwira mudhudhudhu.
Panguva yaakange ave nemakore gumi nemaviri, aive adzidza kuchovha mudhudhudhu waaizoenda nawo kudhamu kunoredza mhuri yake yese mangwanani oga oga asati aenda kuchikoro.
Kunyangwe pave pasina ruzivo rwakanyorwa pamusoro peChikoro chepamusoro chaakadzidza, Sowore aive nedzidzo yepamutemo. Kuti vasvike pamubhadharo wechikoro, Sowore aifanira kuisa nguva yakawanda mukuredza hove.
Nekuda kwekuti makoreji aive asina kuwanda panguva yake yechikoro chesekondari, Sowore aifanira kufamba nzendo refu mazuva ese kuenda kuchikoro kwake.
Hupenyu muHigh school hwaive hwakaomera Sowore asi akatsungirira kusvika kumagumo uye achangopedza chikoro chesekondari, akanyoresa kuYunivhesiti yeLagos (UNILAG) kwaakadzidza Geography nePlanner.
Omoleye Sowore Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Ndichiri kuYunivhesiti yeLagos (UNILAG), Sowore akasimuka achienda pachinzvimbo cheMutungamiriri weVadzidzi Union Hurumende (SUG), ndiko kutanga kwenzendo dzake.
Akachengetedza chinzvimbo chake semutungamiri weSUG kubva mugore 1992 kusvika 1994 uye chirongwa chake chedzidzo chakawedzerwa nemakore maviri mushure mekudzingwa kaviri nekuda kwezvikonzero zvematongerwo enyika pamwe nekuratidzira kwevadzidzi.
SeHurumende yeVadzidzi veHurumende, Sowore aive akatsunga kumisa zviitiko zvechitendero izvo zvave mumvuri pamusoro pechiratidzo chevadzidzi vazhinji paUniversity.
Kutenda kwake kugadzirisa nyaya dzekumanikidza dzehuori uye huwori hwakawandisa muUniversity zvakamukurudzira kutanga chirongwa chekupokana neculture nehusori iye achiri mutungamiriri weSUG
Omoleye Sowore Bio - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Kuita kwaSowore mukuyedza kubvisa mapoka evahedheni ayo aifunga kuti ave huturu kuhupenyu hwevadzidzi vakawanda zvakava nemhedzisiro pairi.
Iwo mapoka ezvitendero aisada kuramba akagadzika sezvo vaisundidzirwa kumadziro, saka vakafunga zvakare kutsiva sezvo vaiona sekunge hondo yakatoziviswa pavari neVadzidzi veHurumende.
Pazuva rinotyisa muna 1994, mamwe emapoka ezvitendero muUNILAG akazvitorera kurova huropi vachitsigira kurwisa chihedheni, saka vakarwisa Sowore uyo aisakwanisa kuzvidzivirira.
Akarohwa zvakaipisisa navo mushure mekunge vamubaya jekiseni Tungamira icho chaive chinhu chine uturu kwazvo. Sowore, rombo rakanaka, akararama pachiitiko icho chaizomuuraya.
Omoleye Sowore Biography - Simuka Mukurumbira Nhau:
Kuna Sowore, kukosha kwekuita kuti nyika ive nzvimbo irinani nekubata nemapoka asina hunhu uye asina musoro munzanga ndicho chinhu chikuru chakakurudzira kuratidzira kwaakaronga kupokana nehurumende yeNigeria muna 1992.
Akarongawo kumwe kuratidzira kwakanangana nehurumende panguva yehondo. Kutevera kudzidza kwake kubva kuUNILAG muna 1995, Sowore akanyoresa chirongwa che master muPublic Administration kuYunivhesiti yeColumbia.
Akakurumidza kutanga Sahara Reporters mukamuri diki muNew York City, nechinangwa chega chekurwisa huwori uye zvisizvo zvehurumende maitiro.
1993 Demo yeHurumende:
Nezuva regumi nemaviri raJune 12, maNigea vakabuda vari vazhinji kuzotora chikamu musarudzo dzenyika dzose dzakatanga kuve nedemokrasi.
Mamirioni gumi nemana, mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematatu zviuru, mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nematanhatu (14,293,396) mavhoti akavhotwa ayo MKO Abiola mutakuri wemureza weSDP akabuda mukundi nemavhoti 58.36% achikunda Bashir Tofa weNRC aive nevasara 41.64% mavhoti.
MKO Abiola angadai akave wekutanga mutungamiri wezvematongerwo enyika weNigeria asi aimbova Musoro weNyika, Gen.
Ibrahim Badamasi Babangida akazivisa kukunda kwesarudzo kwakabviswa. Izvi zvakakonzera kuratidzira uko Sowore aibatanidzwawo, zvichitungamira mukusungwa kwake, kuvharirwa, kutambudzwa pamwe nekurapwa kwakaipisisa nehurumende.
Sowore's zvematongerwo enyika kubatanidzwa hazvina kumira. Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora iyi bio, Sowore ndiye muvambi weAfrican Action Congress (AAC) uye akamhanya semumiriri wemutungamiriri webato rake musarudzo dzese dzeNigeria dza2019 dzaakakundwa Muhammadu Buhari.
Kuenderera mberi, akasungwa neDSS pazuva re3 Nyamavhuvhu 2019 pamberi pe #RevolutionNow kuratidzira kwaakange aronga mu2019.
Iye achiri anochengeta kutenda kwake uye kugutsikana kunyangwe mukutyisidzirwa nerufu uye kubatwa zvisina kunaka uye akasimuka kuita mukurumbira kuburikidza nekuratidzira kwake kwese kurwisa huwori. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Omoleye Sowore Mudzimai:
Nezve chimiro chake chehukama, Omoyele Sowore akaroora panguva yekunyora. Sowore akafamba pasi munzira uye akasunga banga nemoyo wake, Sowore pazuva rechigumi nemana raGunyana 11.
Kubatana kwemuchato kwaSowore nemukadzi wake kwakapa kuberekwa kwevana vavo vanoziva zvishoma nezvazvo.
Mudzimai wake, Opeyemi Sowore akazivisa kumapepanhau kuti vana vake vese vanoda Kisimusi ndeyekuti baba vavo vasunungurwe mushure mekusungwa zvine simba panguva yekutongwa kwake mudare mumwedzi waZvita 2019.
Omoleye Sowore Hupenyu hwemhuri:
Omoleye Sowore anobva kumhuri yepakati yemhuri. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba naamai vaOmoyele Sowore:
Mr Sowore ndibaba vaOmoyele Sowore ukuwo Madam Esther Kehinde Sowore ndiamai vaSowore.
Kunyangwe pasina ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa pamusoro paamai nababa vaSowore, amai vake vanga vachikumbira hurumende kuti isunungure mwanakomana wavo sezvo vachiti mwanakomana wavo aigara achitaura chokwadi achipikisa chakaipa kubva achiri mudiki.
Nezve hama dzaOmoyele Sowore uye hama:
Omoleye Sowore uyo akaberekerwa mumhuri yebarika ane vanin'ina gumi nevatanhatu. Pakave pasina zvinyorwa zvekudhinda kana chirevo chepamutemo chakaitwa pamusoro pehama dzake nehanzvadzi dzake.
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa pamusoro pababamukuru nasekuru vaOmoyele Sowore pamwe nasekuru vake nasekuru nasekuru. Zvakare zvakare kunozivikanwa nezve babamunini naamainini pamwe nababamunini vake.
Omoleye Sowore Hupenyu hwepamoyo:
Kure kure nekushinga kwaOmoyele Sowore uye kuedza kwezvematongerwo enyika, tinokuunzira chokwadi nezvehunhu hwake kuti akubatsire kukupa mufananidzo uzere wake.
Kutanga, Omoyele Sowore persona musanganiswa waAcarius uye anogara achiomerera pakutenda kwake kusvika kumagumo, hunhu hunokodzera maZodiac Traits ake.
Sowore anga akarerekera kushandura nzanga uye nekuibatsira kuti abudirire kubva pahuwori hwevatungamiriri vayo uye nehurumende zvekuti haawanzo kutaura nezvekuzeza kwake uye nezvekufarira parutivi kusvika pakuwana runyararo rune runyararo rune runyararo.
Omoleye Sowore Mararamiro:
Omoyele Sowore ane mari inofungidzirwa kuti inosvika $ 10 miriyoni panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwake kunonyanya kubva kunhepfenyuro yake yeNhau - Sahara Reports apo ongororo yemashandisiro ake maitiro inoratidza kuti haararame hupenyu hwoumbozha sezvaanopa yakawanda yenguva yake kuhunhu hwake.
Hapana ruzivo rwakaziviswa kumapepanhau naSowore maererano nedzimba dzake, mota nezvimwe zvinhu.
Omoleye Sowore akange achipomerwa mhosva yekugamuchira chiokomuhomwe cheimwe imba iri muCalifornia uye inoita madhora zviuru zvishanu kubva kuAll Progressives Congress (APC) muna5.
Akaramba pachena kupomerwa achiti haana kumbobvira agamuchira chiokomuhomwe muhupenyu hwake hwese. Akataura nezvekupomedzerwa senzira iyo vapomeri vake yavanoda kushandisa mukumutadzira.
Omoleye Sowore Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Omoyele Sowore nyaya yehucheche uye biography, hezvino zvimwe zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake izvo zvinokubatsira iwe kuti utore mufananidzo uzere webio yake.
Omoyele Sowore akaberekerwa mumhuri yechiKristu uye akapota achiraira maKristu nezvematongerwo enyika.
Maonero ake nezvematongerwo enyika anoratidza kuti sarudzo hadzifanirwe kuve dzakanangana nemanzwiro echitendero uye nekuda kweichi chiono, akaonekwa achinamata mumosque nevamwe maMuslim.
Omoyele Sowore haana inki chero tattoo pamuviri wake. Nekuda kwehunhu hwake hunopesana nema tattoo einki pamuviri wake, Omoyele Sowore akashingairira kufunga kuti asatyora tsika dzake dzekuzvibata.
Kunwa uye Kusvuta tsika:
Omoyele Sowore haaputi uye haana kubatwa achinwawo. Akagara achiburitsa maonero ake pane inozivikanwa Nigeria Indian Hemp - Igbo (sora).
Vakayambira Nigeria kuti vaise pfungwa dzavo pakushandisa sora rinogadzirwa munyika kusimudzira GDP yaro sezvo huswa hunogona kutengeswa kunze kwenyika kumushonga wemishonga.
Mushure mekufa kweMKO Abiola:
Makore makumi maviri nemanomwe ekuberekwa Omoyele Sowore mu27 akazivisa Mauto persona grata pakuviga MKO Abiola uye akataura zvakajeka kuti vanakomana vaAbhiola vakakundikana vechidiki veNigeria.
Omoleye Sowore akasungwa neDSS musi wa3 Nyamavhuvhu 2019 pamberi pe #RevolutionNow kuratidzira akaburitswa bhaari zvichitevera mutongo wedare. Aive akasungwa zvakare pasi pemakakatanwa mamiriro.
Panguva yekutongwa kwedare musi wa6 Zvita, vamiriri veNigeria Dhipatimendi reState Security (DSS) vakaedza kusunga Sowore, zvichikonzera kupesana kwaisanganisira magweta ake.
Kutevera chiitiko ichi, Femi Falana, rimwe remagweta ane mukurumbira muNigeria uye anotungamira timu yemagweta yeSowore, akasimbisa kuti mumiriri uyu akachengetedzwa uye adzoka muchitokisi cheDSS.
Thanks for reading vedu Omoleye Sowore Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!